ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အတွင်းသားအလှတွေကို အထင်းသားမြင်နေရတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အတွင်းသားအလှတွေကို အထင်းသားမြင်နေရတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
ဒီ ဗီဒီယို လေးထဲ မှာတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော် က သူမ ရဲ့ နောက်ကျော က ပင်ကိုယ် အလှ တရား တွေ က လည်း အထင်းသား မြင်ရပါ တယ်..။ဒါ့ အပြင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရား တွေ ကလည်း တစ်နေ့ တခြား ပိုပြီး ရင်ခုန် စရာကောင်း လောက်ပါ တယ်..။ ကဲ…. ချစ် ပရိသတ် ကြီးရေ မင်းသမီး ချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ ပြင်း​ပြင်း ထန်ထန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေ တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်လေး ကို ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ် နော်..။သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ ယောကျ်ားလေး ပရိသတ် တွေ ကြားမှာ အထူး စိတ်ဝင် စားမှု နဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှု တွေ ကို ရရှိထား တဲ့ သူပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ လက်ရှိ မှာလည်း သင်ဇင်ဝင့်ကျော် က အနု ပညာ အလုပ်တွေ ကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် နဲ့ လုပ်ကိုင် နေပြီး အကောင်းဆုံး လျှောက် လှမ်း နေတာ ဖြစ်ပါ တယ်..။
သူမ ဟာ အချိုးအစား ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ အပြင် တမူ ထူးခြား တဲ့ အလှ တရားတွေ နဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းသူေ လး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။သူမ ဟာ စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝ ပြီး အမြဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ် တဲ့ သူဖြစ်တာ ကြောင့် အနုပညာေ မာင်နှမတွေက လည်း ချစ်ခင်နေ ရတာဖြစ် ပါ တယ်..။ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ ကျစ်လျစ် လှပ တဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေး ကို ထိန်းထားဖို ့အတွက် ပုံမှန် gym ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဆော့ကစား နေတာ တွေ့ရပါ တယ်..။ ယခု မှာလည်း သင်ဇာဝင့်ကျော် က ပရိသတ်ေ တွ အတွက် သူမ ရဲ့ တစ်နေ့ ဆော့ကစား ခဲ့ တဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို တင်ပေး လာခဲ့ပါ တယ်…။
Source & Video Credit-Thin Zar Wint Kyaw’s fb page
ဒီ ဗီဒီယို ေလးထဲ မွာေတာ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ က သူမ ရဲ့ ေနာက္ေက်ာ က ပင္ကိုယ္ အလွ တရား ေတြ က လည္း အထင္းသား ျမင္ရပါ တယ္..။ဒါ့ အျပင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွတရား ေတြ ကလည္း တစ္ေန႔ တျခား ပိုၿပီး ရင္ခုန္ စရာေကာင္း ေလာက္ပါ တယ္..။ ကဲ…. ခ်စ္ ပရိသတ္ ႀကီးေရ မင္းသမီး ေခ်ာေလး သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ရဲ့ ျပင္း​ျပင္း ထန္ထန္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေန တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင္ေလး ကို ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပးလိုက္ ပါတယ္ ေနာ္..။သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ကေတာ့ ေယာက်္ားေလး ပရိသတ္ ေတြ ၾကားမွာ အထူး စိတ္ဝင္ စားမႈ နဲ႔ အားေပး ခ်စ္ခင္မႈ ေတြ ကို ရရွိထား တဲ့ သူပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ လက္ရွိ မွာလည္း သင္ဇင္ဝင့္ေက်ာ္ က အႏု ပညာ အလုပ္ေတြ ကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ နဲ႔ လုပ္ကိုင္ ေနၿပီး အေကာင္းဆုံး ေလၽွာက္ လွမ္း ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္..။
သူမ ဟာ အခ်ိဳးအစား ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ အျပင္ တမူ ထူးျခား တဲ့ အလွ တရားေတြ နဲ႔ ခ်စ္စရာ ေကာင္းသူေ လး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။သူမ ဟာ စိတ္သေဘာထား ျပည့္ဝ ၿပီး အျမဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္ တဲ့ သူျဖစ္တာ ေၾကာင့္ အႏုပညာေ မာင္ႏွမေတြက လည္း ခ်စ္ခင္ေန ရတာျဖစ္ ပါ တယ္..။ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ကေတာ့ က်စ္လ်စ္ လွပ တဲ့ အမိုက္စား ကိုယ္လုံးေလး ကို ထိန္းထားဖို ့အတြက္ ပုံမွန္ gym ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေဆာ့ကစား ေနတာ ေတြ႕ရပါ တယ္..။ ယခု မွာလည္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ က ပရိသတ္ေ တြ အတြက္ သူမ ရဲ့ တစ္ေန႔ ေဆာ့ကစား ခဲ့ တဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို တင္ေပး လာခဲ့ပါ တယ္…။
Previous post ဆက်ဆီကျကျနဲ့ အရမ်းစားနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပုရိသတွေ အကြိုက် ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ အိန်ဂျယ်ကို
Next post အတွင်းသားအလှလေးတွေ ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင် ပိုစ့်ပေးထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် မရမ်ဆိုင်းနူး